मोदीको मन्त्रीमण्डलमा पूर्वप्रशासकदेखि गायकसम्म – Page 10176 – तहल्काखबर
बविताले जितिन् मिस ग्रेस टिन झापाको उपाधि
१० वर्षीय बालकसहित झापामा दुई जनाको मृत्यु
फुत्केर जोगिइन् अपहरणमा परेकी ८ वर्षीय बालिका
आईआईएचटी आठौँ वर्षमा
गर्मीसँगै बढ्यो पूर्वमा विद्युत खपत
मोदीको मन्त्रीमण्डलमा पूर्वप्रशासकदेखि गायकसम्म
२०७६ जेष्ठ १८ ०३:०७ June 1, 2019 तहल्का खबर
नयाँदिल्ली / भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालका गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वप्रशासकदेखि गायकसम्मले मौका पाएका छन् । मोदीले बिहीबार ३३ मन्त्री र २४ राज्यमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् ।
नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वअनुमान गरेअनुरूप नै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाहलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मोदीका निकट विश्वासपात्र शाह उनी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री थिए । यी दुईबीच दुई दशक लामो घनिष्ठ सम्बन्ध छ । त्यसैगरी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई यसपटक रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अर्थमन्त्रीमा निर्मला सिथारमणको चयनलाई पनि रोचक मानिएको छ । स्वतन्त्र भारतमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने इन्दिरा गान्धीपछि उनी दोस्रो महिला हुन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा अर्थमन्त्री रहेका अरुण जेट्लीले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेपछि निर्मलाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा उनले केही समय वाणिज्य र पछि रक्षा मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् ।
पटनासाहिब लोकसभा सिटमा बलिउड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हालाई भारी मत अन्तरले पराजित गरेका रविशंकर प्रसादले पुनः सञ्चार, कानुन तथा सूचनाप्रविधिको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यसअघि पनि मन्त्री रहेका रामविलाश पासवान, हरसिम्रत कौर बादल, थवार चन्द गेहलोत र मुख्तार अब्बास नक्वीले मोदीको दोस्रो कार्यकालमा पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा इरानी टेक्सटाइल मन्त्री थिइन् । यसपटक उनले प्रभावशाली मन्त्रालय पाउने चर्चा चले पनि महिला तथा बालबालिका विकास र टेक्सटाइल मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सिथारमण, इरानी र कौरसहित ६ जना महिलाले मोदी सरकारमा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । हालै सम्पन्न ५४३ सदस्यीय चुनावमा ७८ जना निर्वाचित भएका थिए ।
गायक बाबुल सुप्रियले पनि मौका पाएका छन् । पश्चिम बंगालबाट निर्वाचित सुप्रियलाई हेभी इन्डस्ट्री र पब्लिक इन्डस्ट्र्रिजको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
हालै सम्पन्न चुनावमा भाजपालाई पश्चिम बंगालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी १८ सिट जिताउन उनको प्रमुख भूमिकारहेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार छ । कान्तिपुरबाट
← मोदी सरकारमा जयशंकरको ‘इन्ट्री’, नेपालमा चर्चा !
दिल्लीमा किन खिन्नझैँ देखिए प्रधानमन्त्री ओली ? →
शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासपरिसरको ११३–०–३–० रोपनी जग्गा
रक्सिले मातिएर घरमा आगो लगाउँदा शेरसिंहले गुमाए श्रीमती
२०७६ असार ८ ०८:११ तहल्का खबर Comments Off on रक्सिले मातिएर घरमा आगो लगाउँदा शेरसिंहले गुमाए श्रीमती
दार्चुला / मदिराको मातमा घरमा आगो लगाउदो नौगाड गाउँपालिका वडा नम्बर २ भैसीमेलाका ३२ वर्षिय शेरसिंह बडालले श्रीमती गुमाए
भरतपुरमा दुई बस ठोक्किँदा २० जना घाइते
२०७६ असार ७ ०५:१५ तहल्का खबर Comments Off on भरतपुरमा दुई बस ठोक्किँदा २० जना घाइते
धादिङमा जीप दुर्घटना, मृतकको संख्या पाँच पुग्याे
२०७६ असार ६ १०:२३ तहल्का खबर Comments Off on धादिङमा जीप दुर्घटना, मृतकको संख्या पाँच पुग्याे
जिल्ला अदालतका खरिदार घुस रकमसहित पक्राउ
२०७६ असार ६ १०:०४ तहल्का खबर Comments Off on जिल्ला अदालतका खरिदार घुस रकमसहित पक्राउ
पर्वत / अपाङ्गगता भएका व्यक्तिले आफ्नो हक अधिकारसँगै आर्थिक रुपमा शसक्त बन्नका लागि सहकारीमा आवद्ध हुन आवश्यक रहेको बताएका
गोपिन पोखरेल- बिर्तामोड / शनिबार, बिदाको दिन । दैनिक कार्यालयीय कामकाज भन्दा फरक हुन्छ यो दिन । अरु दिन जस्तो